Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta loo yaqaan magaca; "Ayo". Dabeecadeena Ayoze Perez Carthouse iyo Wacdiyooyinka Aan Laheyn Xaqiiqooyinka waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Ayoze Perez Storyhood - Sheekada Taariikhda. Amaahda Alchetron iyo Goal
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskeeda, waxbarashadiisa / xirfadaha shaqo, mustaqbalka hore ee xirfadda, dariiqa sheekada, sheekada sumcada, nolosha xiriirka, nolosha shakhsiga, nolosha qoyska, iyo xaqiiqooyinka hab nololeed iwm.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu farsamo u leeyahay inuu la qabsado meel kasta oo weerar ah oo ka dhigaysa "Mr Reliable". Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal kubada cagta ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Ayoze Perez's Biography kaasoo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Ayoze Pérez Gutiérrez. Ayoze Perez sida badanaa loogu yeero wuxuu ku dhashay 23 July 1993 ee Santa Cruz de Tenerife, Spain. Hoos waxaa ku yaal sawir qurux badan oo ah waalidiinta Ayoze Perez ee ah dadka reer Canary ee ku yaal xeebta waqooyi galbeed ee Afrika.
Ayoze Perez ee Waalidiinta. Amaahda Instagram
Si ka duwan waxa ay taageerayaasha badankood rumaystaan, qoyska Ayoze Perez ayaa asal ahaan ka soo jeeda Jasiiradda Galbeedka Afrika oo aad uga fog Spain. Jasiiraddeeda ay qabsatay Spain oo ku taal Badweynta Atlanta, 100 kiiloomitir galbeedka Morocco taas oo ah meesha ugu dhow.
Ayoze Perez's Family History iyo Origin. Dammaanad ku socodka MJ, Premier League iyo Wikipedia.
Ayoze oo ka soo koray qoyskeedii dhexe, Ayoze ayaa wakhti badan ku qaatay walaashiis weyn oo loo yaqaan Samuel ama Sammy oo hoos ku sawiray hoosta walaalkiis iyo waalidkiis.
Ayoze Perez's Family. Amaahda Instagram
Ayoze Perez ayaa sidoo kale ku koray guryo diimeed, oo ka yimid laanta Roomaaniga Masiixiga ee diinta kiristaanka ah oo ah diinta weyn ee diiniga ah ee 84.9% dadka deggan Tenerife.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Ayoze Perez sawirka bidix, walaalkiis Samuel ayaa sawirka midig ku sawiran. Amaahda Instagram
Intii lagu guda jiray 1990s, jasiirada hurdiga ah ee Tenerife ayaa si joogta ah u jahawareeraya qeylada kubada cagta ee ay sameeyeen Ayoze iyo walaalkiis weyn ee Sammy. Inkastoo ay sii koreen, labada ciyaaryahan ayaa ciyaaraha kubbada cagta ciyaaray maalin kasta labadaba garoonka dhexdiisa iyo gurigooda dhexdiisa.
Kuwa iyaga ogaa waxay dib u qeexi doonaan wiilasha sida xiddigaha mustaqbalka kuwaas oo lahaa xidhiidh gaar ah iyo fahamka maskaxeed ee ku saabsan ciyaarahooda. Hore, labaduba waxay ku riyoodeen riyada helitaanka waxbarasho kubada cagta iyada oo loo marayo akadeemiyadda. Iyada oo bedel lagu samaynayo ficil-qaadashada gudaha, waalidiinta Ayoze Perez waxay go'aansadeen in ay wiilashooda ku wareejiyaan akadeemiyada Tenerife, CD San ​​Andrés.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Mudnaanta Hore
Doonista kubada cagta iyo baahida loo qabo inay soo bandhigto awooddooda waxay muujisay Ayoze iyo Sammy labadaba inay ku qoraan liiska kooxahooda, CD San ​​Andrés.
Inkastoo Ayoze uu u ciyaaray khadka dhexe, walaalkiis walaalkiis Samuel ayaa u ciyaaray sidii hore. Waalidiintooda waxay isku raaceen in labadaba wiil ay ka wada ciyaaraan koox isku mid ah si ay u wada joogaan. Si wada jir ah ayaa loo wada ciyaaray isla kooxdii si tartiib tartiib ah u aragtay Ayoze oo ka soo horjeeda ciyaartoyda waaweyn taas oo si dhaqso ah u dhalisay.
Ka dib markii ay sanado ku qaadatay CD San ​​Andrés, dhalinyaro Ayoze ayaa u dhaqaaqay UD Santa Cruz, oo ah naadiga akadeemiga ah ee caan ka dhigaya ciyaartoy da 'yarta ah oo ku soo baxay akadeemiga Tenerife kaas oo dhacaya mid ka mid ah akadamiga ugu weyn kubada cagta ee Island.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Waddada loogu talagalay sheekada
Ayoze hamiga iyo salaadda si ay u noqoto ciyaaryahan weyn oo kubadda Tenerife ahna ma tagin sida soo gudbinta quruxda.
Ayoze Perez ee Waddada Abuurista Sheekada. Lacagta Adduunka
Sannadkan 2011 iyo 2012 waxay calaamad u noqdeen bartilmaameedka dhalinyarada. Waxay ahayd sannadkii uu ku biiray Tenerife B iyo A siday u kala horreeyaan.
Diidmada Real Madrid iyo FC Barcelona:
Aysan qaadan waqti dheer Ayoze si ay u bilaabaan aragti la leh Tenerife. Bishii Oktoobar 2014, Ayoze ayaa ku guulaysatay Ciyaartii ugu danbeysay ee 2013-14 Segunda División. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican ciyaaryahanka khadka dhexe ee 2013-14 Segunda División.
Ayoze ayaa si dhaqso ah u dhaqaajiyay kaalimaha sare ee kubada cagta, ka dib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee qeybta Segunda. Tani waxay aragtay Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku qulqulaya isaga inta lagu jiro xagaaga 2014. Naadiga Newcastle ayaa ah kooxdii ugu fiicnayd tartanka, waxaana ay aheyd Newcastle oo dooneysay inay lasoo saxiixato Ayoze.
Ma ogeyd?… Ayoze Perez walaalkiis oo sidoo kale ahaa ciyaaryahan kubada cagta ah ayaa go'aansaday inuu ka tago kooxdiisa si uu u raaco walaalkiis England isagoo rajeynaya inuu isku meel dhigo koox. Labada walaalo ee ka tagay Santa Cruz ee waqooyiga Tenerife si ay u ogaadaan riyooyinkooda Newcastle.
Ayoze iyo Sammy waxay ku nool yihiin riyooyinkooda. Ku darso Chronicle Live
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Kusoo sharax sheekada
Newcastle ayaa ku iibsatay kaliya £ 2 ee Ayoze taas oo ah lacagta lafdhabarta ee ciyaarta casriga ah. Kadib markii uu yimid Newcastle, Ayoze wuxuu u guuray guri dabaq leh walaalkiis Samuel.
Labada walaalo waa inay bartaan sidii ay ula qabsan lahaayeen magaalada, luuqada, dadka, dhaqanka.
Perez ayaa mar yiri. "Wax fikrad ah kama qabin meesha, meesha uu ku yaalay England, wax walba oo dhan. Waxay ahayd arrin la yaab leh in la arko, sida Newcastle u fiican tahay. Haa, waxaan u guuray walaalkay markii ugu horeysay halkan. Isla markii aan saxiixay wuxuu qaatay go'aanka ah inuu igu soo noqdo, waan nahay, weligay weyddiin, wuu yimid! Waxaan wada jirnay wadada oo dhan. "
Sannad weyn ayay u ahayd walaalaha Tyneside oo ay ugu yeedheen guriga. Waxaa jiray daqiiqado wanaagsan, daqiiqado xun oo kubada cagta ah. Wakhtiga qorista, khadka dhexe ee weerarka ayaa leh wuxuu noqonayaa mid aad u sarreeya oo xoog badan isaga oo iskaashi la leh Salomón Rondón.
Ayoze Perez's Rise si ay sheeko u noqoto. Ku darso Chronicle Live
Sida Alan Shearer, Ayoze had iyo jeer waa la xusuusan doonaa halyeeyga Newcastle. Inta kale, sida ay sheegaan, hadda waa taariikh.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Xiriirka
Iyadoo Ayoze Perez ay ku soo caan baxday magaceeda, su'aasha ku saabsan farriinta qof walba waa ...Yaa Ayose Perez saaxiibkiisa, xaaskiisa ama WAG?.
Ayoze Perez's Girlfriend. Amaahda Instagram
Ayoze Perez suurtagalnimada qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah waa mid si dhab ah uga baxsanaya indha-indheynta dadweynaha, sababtoo ah nolosha jacaylku waa mid gaar ah. Sanado badan, Ayoze Perez ayaa doorbiday inuu diiradda saaro xirfaddiisa waxaana uu doonayay in uu ka fogaado waxkasta oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah. Xaqiiqadani waxay nagu adkeyneysaa inaan helno wax macluumaad ah oo ku saabsan noloshiisa jacaylkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay warbixin la aqbali karo, Ayoze Perez ayaa la socday saaxiibtiis aan la garanaynin in ka badan sanado 3 ka hor inta aan la sameeyn hindise. Sida laga soo xigtay FootallImagines;
"Ayoze Perez waxay ku bilaabantaa in ay ku fogaato iyada oo ay u maleyneyso inuu isku dayi doono, laakiin waxa uu soo baxayaa inuu qorsheynayo inuu soo jeediyo (garoonka dhexdiisa ka dib ciyaarta)." Waxaa la aaminsan yahay inay hadda is qabaan.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaatid Ayoze Perez noloshiisa gaarka ah ee kubada cagta ayaa kaa dhigi doonta sawir buuxa. Bilaabidda, Perez waa mid naxariis badan, deeqsi ah, diiran oo qumman, faraxsan. Tani waxay ka dhigeysaa geedka canabka ah ee kubada cagta.
Bilaabidda, waa qof ka soo horjeeday dhowr arrimood marka ay timaado mas'uuliyadda bulshada ee carruurta.
Ma ogeyd?… Perez waa danjiga aasaasiga ah ee Newcastle. Marar dhif ah, wuxuu u soo baxaa iskuulada si loogu qeybgalo bulshada dhexdeeda iyadoo loo marayo kubada cagta.
Ayoze Perez Xaqiiqooyinka Nolosha Shakhsiyadeed - Amaahda Instagram
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Qoyska
Laga soo bilaabo Tenerife ilaa Tyneside, Ayoze Perez's family waxay guri ka heshay Newcastle iyagoo uga mahadceliyay guusha wiilkooda ugu yar. Hoos waxaa ku jira fiidiyoo oo muujinaya farxad farxad leh qoyska qoyska Perez sida ay u dabaaldegaan dhalashadii xubinta qoyska ugu guulaha badan.
Ka gaabsaday xisaabtanka warbaahinta bulshada ee Ayoze iyo fiidiyoowga qoyska ee kor ku xusan, waxaad si fudud u ogaaneysaa inuu ka dhow yahay hooyadiis aabihiis. Si kastaba ha ahaatee, AyozeDaacadnimada si loo hubiyo in waalidkiis ay raaxo iyo content ay la mid tahay ballanqaadkiisa kubada cagta.
Ayoze Perez's Hooyada. Amaahda Instagram
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan walaalkiis: Samuel Pérez Gutiérrez wuxuu ku dhashay Mar 23, 1990 taas oo muujineysa inuu yahay saddex sano jir ka weyn walaalkiis Ayoze.
Ayoze Perez's Brother- Samuel. Amaahda Instagram
Big Sammy weligeed waxaa lagu xasuustaa mid ka mid ah walaalaha ugu caansan kubada cagta. Sida horay loo arkay, wuxuu sameeyey samaynta ugu dambeysa ee ka caawinta walaalkiis degganaashiisa shirkad xitaa marka uu jihada u jihaadayo jagada uu u qabay walaalkiis.
Ma ogeyd?… Sammy wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee horyaalka ka dib markii uu Newcastle kula noolaa walaalkiis. Inkastoo Ayoze uu si degdeg ah u kordhay tan iyo markii uu yimid Tyneside bishii June 2014 waa la yaqaan, safarka walaalkiis ee waayeelka ah wuxuu ahaa mid aad uga fog diintiisa iyo in kale.
About Ayoze Perez Qaraabada: Dhamaan wiilasha wiilashooda ee jooga Perez ayaa ku jira ganacsiga kubada cagta. Xitaa qoysaska la dheereeyey. Ma ogeyd?… Ayoze's ina María José Pérez sida waqtiga qorista waa weeraryahan loogu talagalay Levante UD Femenino iyo sidoo kale xubin ka mid ah xulka qaranka Spain.
Ayoze Perez's Cousin-María José Pérez. Amaahda YouTube
Isagoo ka eegaya muuqaalkeeda, waxaad si sahlan u arki kartaa muuqaalka ugu dhow ee Perezs.
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - LifeStyle
Sida laga soo xigtay TransferMarker, Ayoze Perez waxay leedahay qiimaha suuqa 10,00 Milliga. Mushaharka todobaad ee £ 45,000 hubaal ayuu ka dhigayaa isaga oo ah ciyaaryahan kubadeed. Tani, si kastaba ha ahaatee, kama badna qaab nololeedyo muuqda.
Ayoze waa mid caqli badan oo ku saabsan maareynta kubada cagta. Taas macnaheedu waa inaadan kharash gashan sida waalan, ama bedelida qaab nololeedkiisa.
Xaqiiqooyinka LifeStyle Ayoze Perez. Amaahda Instagram
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Magaca "Ayoze"Inta badan waxaa si qaldan u fahmay qaar ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta si ay uga soo jeedaan Nigeria. Magacani wuxuu u dhigmaa qabiilka Igbo ee ku hadasha afka Geeska Afrika. Sidoo kale, ninkeeda Ayoze Perez ayaa ah "ayo". Naanaysta Tani waxay sidoo kale ku dheehan tahay qabiilka Yoruba ee ku hadla qabiilka Nigeria
Ayoze Perez waxay leedahay muuqaal, kiis ay heshay taageerayaal iyo bloggers in ay ka fakaraan in ay ka fakaraan sawir gaar ah Santiago Munez sawirada Ayoze inta lagu jiro caruurnimada.
Ayoze Perez Xaqiiqooyinka Is-tiri-Ku saabsan muuqaalkiisa. Ku darso Twitter
Ayoze Perez waxay ku dhalatay 1990s kaas oo inta badan lagu xasuusto tobanaan sano oo barwaaqo ah. Intaa waxaa dheer, 1990s waxay arkeen Midowga Soofiyeedka oo ku dhacay wiilasha iyo wiilasha (Boyz II Men, Backstreet Wiilasha iyo Badbaadada West) waxay xukunteen jaantuska muusikada.
Toban sano ka dib waxay arkeen kor u qaadka Internetka (World Wide Web). Sidoo kale 1990's, fariinkiisii ​​ugu horeeyay oo SMS ah ayaa la soo diray, DVD-yada ayaa la abuuray, Sony PlayStation ayaa la sii daayay waxaana la aasaasay Google. Isagoo ka hadlayey PlayStation, Ayoze waa FIFA addict.
Ayoze Perez Xaqiiqooyin aan sax ahayn - FIFA Lover. Ku darso Twitter
Waqtigan xaadirka ah sida qoraaga, Ayoze ayaa kaalinta 13 kaga jirta gooldhaliyaha guud ee Newcastle. Michael Owen raacaya xiga.
Ayoze Perez's Newcastle ee goolka guusha. Ku darso Twitter
Ayoze Perez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Soo koobista muuqaalka
Fadlan halkan hoose ka eeg, soo koobitaan video video ah ee profile this. Si wanaagsan u booqo oo u qoondeeysid annaga Youtube Channel Wixii fiidiyoow ah.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin akhrinta Ayoze Perez Storyhood plus iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Leicester Wareysiga Kubadda Cagta
dadaalka jonera Luulyo 1, 2019 XXX: 6 pm
Waxaan mar walba rabaa inaan la kulmo xajmiga
imaw taageere weyn oo Zimbabwe ah.
Saul Niguez Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta Leh
Juan Mata Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Cesc Fabregas Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta